ငြီးငွေ့သောအရပ်တို့ကိုမသင်ပေးနိုင်တဲ့အရည်အသွေးကောင်းညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ? ဖန်စီနယ္အခ်ဳိထွက်အနည်းငယ်အပိုရနိုင်ဖို့အတွက်ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ၏အကြိုက်ရာအနည်းငယ်မြင်ကြပြီ။ ထိုအခါပါရစေဖို့သင်ကြိုဆိုပါတယ်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စီမံကိန္းကို:ပေးဆောင်ညမ်းဂိမ်း! အဖြစ်ခေါင်းစဉ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်:မမှာအားလုံးအရှက်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အမင်္ဂလာသည်ငွေသားများအတွက်ကောင်းသောဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ။ ကိုယ့်မှာတကြည့်ကီးေဂိမ်းကစားကမ္ဘာ့ဖလားလိမ့်မည်ကိုပြသကြောင်းသင်တို့အဘို့အဘယ်သို့သောပေးဆောင်ရ–အထူးသဖြင့်ကြွလာသည့်အခါမှပလက်ဖောင်းများနှင့်အတူရေနွေးငွေ့!, သေချာတာပေါ့၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အနည်းငယ်ကောင်းသောအခမဲ့ဂိမ်းများထွက်ရှိအင်တာနက်အပေါ်၊သို့သော်အဘယ်အပေးအမှန်တကယ်ပေးခြင်းအားဆက်လက်သင်ပုံမှန်ထေးနှင့်လတ်ဆတ်သောမွမ်းလျှင်သူတို့တွေဟာလျော်ကြေးငွေရေးကြေး? ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့ပုံစံဒီဂိမ်းအတွက်ဒါဟာမင်းအတွက်အချိန်အခြားသူများအားလည်းနားလည်ကြောင်းရှိပါတယ်အဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုနှင့်အတူအမေးများအတွက်ငွေကြေးသည်လဲလှယ်အတွက်ဂိမ်းသုံးစွဲလျှင်သင်သည်သင်၏ဂိမ်းအမှန်တကယ်ကောင်း! သောအရပ်တို့ကိုပေးကြ၏အကအားလုံးကိုပယ်ရှားသည်အခမဲ့? ကောင်းစွာ၊ထိုအချာသင်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။, သူတို့ကပြည့်နှက်နှင့်အတူကြော်ငြာသို့မဟုတ်ပိုဆိုး၊နည်းပညာပိုင်းမဟုတ်အခမဲ့ဂိမ်းများကြောင့်မပြည့်စုံဘဲသူတို့ကိုလက်ကျော်ငွေ! ပဲကြည့်မှာသကြားလုံးအရူးအမူးနှင့်အတူ:အကောင်းကံရတဲ့ကောင်းသောဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံဆန္ဒရှိမဟုတ်ပါဘူးလျှင်ပွင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ပိုက်ဆံအိတ်။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ပေးဆောင်ညမ်း။ ထို့နောက်အောက်တွင်ဖတ်ပါ–ငါကိုပေးပါလိမ့်မယ်သင်သည်ငါ၏အပြည့်အဝအကြံအစည်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်ဒီပလက်ဖောင်း!
ငါဖြစ်ချင်တက်-ရှေ့ကကြောင်းလမ်းပေးဆောင်ညမ်းဂိမ်းများအလုပ်လုပ်တယ်:ကျနော်တို့တာဝန်ခံသင်သည်အလစဉ်အတွက်သုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်အပေါ်အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အလုပ္-လုပ္။ ရှိပါတယ်မျှအလွန်အကျွံအဆင့်မြင့်စွဲချက်အရဖျက်သိမ်းမည်သည့်အချိန်တွင်သင်ချင်။ ကျနော်တို့ကြိုးစားခဲ့ချသွားကျင့်ဝတ်လမ်းနှင့်အတူဤသို့လည်း:သင်သာလိုအပ်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ'ပယ်ဖျက်'ခလုတ်ကို၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ပရိုဖိုင်းနှင့်ငွေတောင်းခံသံသရာခေတ္တ(သင်ဆဲသုံးစွဲ၏အဆုံးအထိအလုပ္လွန်း!)။ ဤအပြင်၌၊ပေးဆောင်ညမ်းဂိမ်းများစွဲချက်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ယုံကြည်ဖို့အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေမှနှိုင်းယှဉ်ပါကများ၏အားလုံးအခြားအရပ်ထွက်ရှိပါတယ်။, ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ရင်းအရေအတွက်၏အသင်းဝင်:အပိုကလူတက်လက်မှတ်ထိုး၊အကောင်း! ကျွန်တော်ကျူးလွန်မိဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားနေအများစုအတွက်ဝယ်လိုအားပလက်ဖောင်းအတွက်အရွယ်ရောက်နေရာများ၊အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဝင်ရောက်မော်ဒယ်သည်အကျွန်ုပ်တို့သွားပါ-ဖို့နည်းလမ်းကိုရတဲ့၏မိတ်ဆွေအကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားတက်လက်မှတ်ထိုးရန်ပေးဆောင်ညမ်း။ အမှုအရာများအဘို့ကြီးသောခဲ့အဆိုပါ ၃+နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့တည်ရှိမှုအတွက်၊ဒါပေမဲ့သူတို့အဖြစ်လိမ့်မယ်ပင်ပိုကောင်းပြီးတာနဲ့သင်တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်ဘယ်လောက်အလွန်ကြီးစွာသောအမှုအရာ။ ဒါကြောင့်၊အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးအခုအဖမ်းတစ်ချပ်၏အရေးယူ? သိကအာရုံစေသည်!
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ငွေပေးချေမှုကနေလူတွေကိုပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာ၊ဒါကြောင့်အများကြီးအာရုံသည်ငါတို့အဘို့အတက်ဆောက်လုပ်ဖို့အများကြီးအဂိမ်းဒေတာဘေ့စ။ လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ် ၁၅ အုပ္ဆုိင္ဒီမှာနောက်တစ်နှစ်၊ကျနော်တို့အစီအစဉ်မှဒီအကြောင်း ၂၀(ပေးထားကြောင်းမပိုရူးဘဏ္ဍာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ပေါက်တူ COVID!)။ ဒီလူတွေအလုပ်အများကြီးတစ်ငရဲနှင့်လက်ျာဘက်ယခု၊သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ၅၇ ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူနောက်ထပ် ၁၀ ရရှိနိုင်ကန့်သတ် beta ကိုစမ်းသပ်။, ပါကအားလုံးဒီဂိမ်း ၁၀၀%အလုပ်အတွက်ထုတ်လုပ်-အိမ္၊ဆိုလိုတာကသင်ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ကြောင်းအမေရိကန်ခိုးယူထုတ်လုပ်ပြီးမှတခြားနေရာသို့မဟုတ်၊ပိုဆိုးတာက၊အကြှနျုပျတို့သူတို့ကိုပယ်သွားပေးတဲ့နေရာသင်အခမဲ့အဘို့ထိုသူတို့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကအရမ်းကိုဂုဏ်ယူ၏အလုပ်ငါတို့သည်ထဲသို့သွင်းထားပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်လည်းအချစ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဖုံးအများကြီးတစ်ငရဲဆှ niches။ ဒါဟာမကောင်းရုံဖြစ်ခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားတဆှအမျိုးအစား၊လက်ျာ? သင်ရရှိပါသည်သင်သည်သင်၏ပိုက်ကွန်ကိုင့္ဒါအဖြစ်အများအပြားကြောယောက်ျားတွေအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှရနိုင်၏တစ်ဦးအချပ်အရေးယူ။, ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အချက်များရသည့်အခါသင်ပေးဆောင်ညမ်းဂိမ်းသင်တို့အဘို့အိမ် XXX ဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ:ဖြုန်းအကြောင်းကိုမေ့လျော့သင့်ငွေမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန် ၃ သို့မဟုတ် ၄:များစွာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာနှင့်ဒေတာဘေ့စအကြီးထွားလာသည်အသီးအသီးများနှင့်အသီးအလ! တဖန်ကျွန်မတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေလိုသောအခါသင်ပေးဆောင်ကြောင်း၊သင်အမှန်တကယ်အထောက်အကိုအခုလိုထုတ်လုပ်မှု၏။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စနစ်နှင့်အဘယ်အရာကိုရွင္စဒါမင်းအတွက်အရည်ရွှမ်း! ကောင်းပြီ၊နိုင်ငံရေးဘေးဖယ်:ခင်ဗျားချစ်သွားပေးဆောင်ညမ်း။
ကျနော်တို့ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာစီစဉ်ထားတဲ့ဒီမှာပေးဆောင်ညမ်းဂိမ်းများ၊ဒါကြောင့်သင်ကြိုက်လျှင်သင်ပလက်ဖောင်းအကြောင်းအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့ဖို့ကြိုးစားတက်လာနှင့်အတူအသစ်အတွေးအခေါ်နှင့်အယူအဆ၊သင်ျာအတွက်င်။ ပေးဆောင်ညမ်းဂိမ်းများလိမ့်မည်ချေမှုန်းရေး၏အာရုံနှင့်အတူတစ်အနာဂတ်ပြွန်လွှင့်ထုတ်ဝန်ဆောင်မှုကအိမ်အချို့၏အပူဆုံး XXX ဗီဒီယိုထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အဖြစ်မှန်ဘုရင်၊Brazzers၊အဖွဲ့ Skeet။ ဤမည် ၁၀၈၀ ဗီဒီယိုများနှင့်လုံးဝအခမဲ့သင်စမ်းချောင်း!, ငါတို့သည်လည်းအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းရန်ထုံးစံ modding ဖို့အနည်းငယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်း၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တွမ်အင်္ဂါရပ်ဆု nab တွက်အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းတပ်ဆင်ထား၊စစ်မှန်သောအသက်ကိုပြန်ပြီးတော့။ ပေးဆောင်ညမ်းဂိမ်းများလိုဖြစ်လာဖို့အင်တာနက်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးနေရာသွားကြဖို့အပြာကားဂိမ္းချမ်းသာ:ဘာမှမဟုတ်ကြောင်းပြီးသွားမှလဲကောင်းကောင်းအတို၊ဒါကြောင့်တွက်ရင့်နေစဉ်!!
အဖြစ်အများကြီးလိုနေရာနှင့်အကြောင်းပြောဆိုမြက်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့များနှင့်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေနိုင်စွမ်း၊ငါရဲ့စဉ်းစားသောအချိန်ခန့်သင်ကြိုးစားခဲ့ထွက်ပေးဆောင်ညမ်းဂိမ်းများများအတွက်ကိုယ်နဲ့အမြင်အတိုင်းအဆမဲ့စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းကိုအတူတကွထားရန်အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ။ ဒါဟာတစ်ဦးအကြွင်းမဲ့ပေါက်ကွဲမှုစီမံခန့်ခွဲရန်ဒီနေရာနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်နှင့်ငါတကယ်သင်မွေ့လျော်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်င့်အဘယျသို့အတွင်း၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ။ လာမယ့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်လမ်းတစ်လျှောက်–အခုသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနှင့်ကြိုးစားကျွန်တော်တို့ကိုအဘို့အထွက်အလုပ္! ကျနော်တို့အပြည့်အဝငွေပြန်အာမခံနှင့်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းစီစဉ်အတွက်ရှည်လျားသောအဝုိင်းအကောင်းဆုံးအဆင့်ရှေ့ဆက်။, စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ဂိမ်းကစား–ၿငိမ္းခ်မ္းေရး!